702★Indawo yokuhlala yaseNara Suite★2KingBed+Kitchen★会说中 - I-Airbnb
702★Indawo yokuhlala yaseNara Suite★2KingBed+Kitchen★会说中
Khet Yan Nawa, Krung Thep Maha Nakhon, i-Thailand
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Amb Ville
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Amb Ville izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ukushayela imizuzu emi-5 ukusuka eSathorn Business District.
I-6.5 km ukusuka e-Siam
Imizuzu engu-3 uhamba ngezinyawo usuka eBRT Thanon chan Station
1 KM ukusuka enkabeni yerama 3
✔5min ukuze ushayele ku-BTS
✔Ilungele umndeni nabangane
✔ i-inthanethi ye-WiFi, i-Cable TV
✔Ayikho indawo yokugeza yokwabelana, Onke amagumbi okugeza e-en-suite
✔1 iminithi uhamba ngezinyawo uye ku-7-11 / Inani eliphakeme
Sinomshini wokuwasha. Amagumbi okugeza angasese afika neshawa noma ubhavu.
- Itafula lephuli
- Ikhebula le-TV
- Indawo yokudlela eminingi eduze
- Izindlela ezahlukene zokuhamba
Sitholakala e-Narathiwas Soi 24/ Sathupadit Soi 19. Lena enye yezindawo ezidume kakhulu e-Bangkok kwabaphuma kwamanye amazwe futhi inokufinyelela okuhle kakhulu kuzo zonke izingxenye zedolobha. Kude nje imizuzu emi-5 ukusuka eSathorn nemizuzu eyi-10 ukusuka eSilom - izindawo ezimbili zedolobha ezaziwa kakhulu ngebhizinisi, ukuzijabulisa kanye namanxusa.
Le ndawo inezindawo zokudlela eziningi nokukhetha kuzo, izitolo zekhofi spa kanye nesitolo esikhulu samahora angama-24. Kukhona nesikole samazwe omhlaba imizuzu emi-5 nje uhambe.
Ngamazinga athengekayo; nsuku zonke, masonto onke, noma nyanga zonke, kanye nezinsiza zesimanje, ungaqiniseka ukuthi sizohlangabezana nazo zonke izidingo zakho futhi sikunikeze ukuhlala okujabulisayo eBangkok.
Isivakashi sinokufinyelela igumbi lonke
1 umbhede omkhulu, Umbhede omkhulu ongu-1, Omatolasi abangu-1
I-Sathorn iyisinqumo esihle kubahambi abathanda amathempeli, isiko kanye nokubuka indawo. Indawo yethu yokuhlala iseduze nezitolo ezinkulu zomphakathi eziningi.
Ibungazwe ngu-Amb Ville
Isikhathi esiningi ngisedolobheni, cishe imizuzu eyi-10 ngemoto usuka lapho okuhlala khona